मानिस अ’हंकारी भइरहेको थियो, कोरोनाले औ’कातमा ल्याइदियो- अनुपम खेर – eSidhakura
मुख्य पृष्ठUncategorizedमानिस अ’हंकारी भइरहेको थियो, कोरोनाले औ’कातमा ल्याइदियो- अनुपम खेर
मानिस अ’हंकारी भइरहेको थियो, कोरोनाले औ’कातमा ल्याइदियो- अनुपम खेर
एजेन्सी – भारतीय चर्चित अभिनेता अनुपम खेरले को’भिड-१९ ले मानिसको अ’हंका’र’लाई औ’कातमा ल्‍याइदिएको र बल्ल मानिसहरु जीवनको मू’ल्‍य बुझ्न थालेको बताएका छन् ।खे’रले सामाजिक सञ्जालमा ट्विटमा भिडियो पोस्ट गर्दै भनेका छन्, ‘कस्तो हुनुहुन्छ तपाई ? तपाइले सोच्नु भएको छ की जीनवमा कुनै चीजको मूल्‍य नै छैन ।कुनै उपलब्धि होस वा कुनै अ’चिभमेन्ट। मसँग यति धेरै सर्ट छ, यति वटा कोट छ, सुट छ वा म यो चीजको तयारी गरिरहेको छु। हेर अब म के गरेर देखाउँछु। म आफ्नो कक्षामा प्रथम आउँछु। अब यी सबै बेइमानी जस्तो लाग्न थालेको छ ।
उनी फेरि मानिसको र’वाफ र घ’मण्डलाई व्‍यंग्य गर्दै जो’ड्छन्, ‘ मसँग गाडि छ, बंगला छ, तिमीसँग के छ ?’ उनी फेरि आफैलाई व्यंग्य गर्छन् र भन्छन्,’ मसँग त आमा पनि हुनुहुन्‍न । भाइको घरमा बसिरहनु भएको छ ।’ उनले अहिले यो ल’कडाउनमा मानिसको सबै महत्वपूर्ण चीजहरु तु’च्छ जस्तो भएको दा’बी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले महत्वपूर्ण मा’नेका यी सबै चीजहरु अहिले के’वल शून्‍य मात्र जस्तो भएको छ । हामीलाई पहिल्‍यै स’म्झिनुपर्थ्यो की हामी शून्‍यबाटै आएका थियौ, शून्यमै जाने हो ।तर हाम्रो दि’माग ख’राब भएको थियो।
हामी अ’हंकारको चरम सीमासम्‍म पुगिसकेका थियौ। उनी अ’हंकारी मा’नवलाई ह’प्काउँदै भन्छन्, ‘थैट! हामी आफैंलाई भगवान स’म्झिन लागेका थियौ । हामी त ना’रा नै ब’नाइ सकेका थियौ की ऊ भगवान हो ।तर दु’र्भाग्‍य जा’बो एउटा कोरोनाले आयौ नि सबै आफ्नौ औ’कातमा । सबै ड’राएर क्वा’रेन्टिनमा बसिरहेका छौ ।’ भिडियो